नेपालका विजय महर्जन अष्ट्रेलियन आर्मीमा नाम निकाल्न सफल महिना यति धेरै तलब खान्छन् ! – Khabar28media
नेपालका विजय महर्जन अष्ट्रेलियन आर्मीमा नाम निकाल्न सफल महिना यति धेरै तलब खान्छन् !
August 1, 2021 August 17, 2021 - by admin - LeaveaComment
अष्ट्रेलिया : विजय महर्जनलाई आज जस्तै लाग्छ अ’ष्ट्रेलिया आएको त्यो पहिलो दिन । सन् २००९ मा विद्यार्थी भिसामा नेपालको पाटनका उनी अष्ट्रेलियाको उडेका थिए । कक्षा १२ सम्मको पढाइ सकेपछि उनले होटल म्यानेजमेन्टको लागि नेपालमै छात्रवृत्तिमा पढ्ने निधो गरे ।
परिक्षामा नाम निकालेता पनि उनको लुक्स, उनको शैलीलाई कारण देखाएर छात्रवृत्ति दिइएन । अन्तर्वार्तामा जाँदा पनि भलाद्मी देखिने किसिमको पहिरन तथा शैली नहुनु उनको लागि अवरोध बन्यो । त्यसपछि विजय महर्जनले अष्ट्रेलियालाई आफ्नो शैक्षिक गन्तव्य बनाउने निधो गरे ।
आफ्नो जग्गा बेचेर आएको पैसाले विजयका बुवाले उनलाई अष्ट्रेलियाको लागि बाटो खुल्ला गरिदिए । धेरै नेपाली विद्यार्थीको गुनासो, अष्ट्रेलियामा नेपालीबाट ठगिएको हुने गर्छ । यसकै माा’रमा उनी पनि परे ।
तर त्यो ठाउँमा पुग्दा विजयलाई भनियो कि, उनले तिरेको पैसा र ती व्यक्तिले भनेको आधारमा केही पनि हुँदैन । उनले फेरी पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ ।साथीहरुको साथ, आमा बुवाको भरोसाले विजयलाई अष्ट्रेलियाको जस्तोसुकै कठीन परिस्थितिसंग पनि जुध्ने हिम्मत दियो । उनी सम्झिंचन् , ” म कहिल्यै निराश भइन ।
अष्ट्रेलिया आएपछि काम खोज्दाका दिन सम्झिदै विजय भन्छन् , ” मलाई काम खोज्न, काम माग्न, मानिसहरुसंग बोल्न कहिल्यै पनि लाज लाग्ने, अप्ठ्यारो लाग्ने भएन । धेरै साथीहरु काम खोज्दै हिंड्न अप्ठ्यारो मान्ने, काम खोज्दा लाज मा,न्ने भएकै कारण काम नपाएको मैले पाएँ “।
करियरको विकल्प खोज्दै जाँदा उनले मार्केटिंग पनि गरे । तर त्यो काम मन नपरेपछि केही दिन पछि नै मार्केटिंगको काम छोडे ।काम खोज्दै जाँदा विजयले उबरको काम गर्न थाले । उबर चलाउँदा चलाउँदै उनले अष्ट्रेलियन प्रहरीमा एप्लाई गरे। तर कामले गर्दा उनलाई त्यसको प्रोसेसको लागि जाने समय मिलेन । त्यही समयमा उनले म्युजिकमा डिप्लोमा समेत गरे ।
त्यसको साथै नेपालीले नेपालीको खुट्टा तान्ने बानीले उनी त्यहाँ आजित भएका थिए । त्यसैले पनि उनले उक्त रेष्टुरेन्ट छोडे र करियर परिवर्तन गर्ने निर्णय गरे । त्यसपछि विजय महर्जनले हस्पिटालिटी ट्रेनिंग गरे, रियल स्टेटको कोर्स समेत गरे । तर ती काममा काम माग्न जाँदा सबैले अनुभव धेरै भएको व्यक्ति माग्थे ।
आर्मीमा एप्लाई गरेपछि सुरुमा लिखित परिक्षा दिनुपर्थ्यो । पछिल्लो गाह्रो प्रश्नहरु उनले छोडेर हिडेका थिए । त्यसैले पनि विजयलाई पास हुन्छु भन्ने आशा थिएन, तर उनी पास भए । तर शारीरिक परिक्षा उनको लागि कठीन बन्यो । उनले तेस्रो पटकमा उक्त परिक्षा पास गरेका थिए ।
आर्मीमा अंग्रेजी भाषा, स्थानीय लवज र बोलीचालीका शब्दले गर्दा उनलाई बुझ्न कठीन हुन्थ्यो । कहिल्यै बन्दुक नजिकबाट नदेखेका, नचलाएका विजयलाई बन्दुक बारे बुझ्न हिमाल चढ्नुभन्दा गाह्रो लाग्यो । बन्दुकको लागि लिइने परिक्षामा उनी तेस्रो पटकमा मात्र पास भएका थिए । तर उनले कहिल्यै हार मानेनन् ।
आर्मीमा गएपछि उनले सिकेको कुरा पनि यही हो , ” अझ बढी प्रयास गर । अहिले गरिरहेको भन्दा अझ बढी प्रयास गर्दा तिमी मर्दैनौ ” ।२०१८ मा अष्ट्रेलियन आर्मीमा भर्ती भएका विजय महर्जन अहिले आफ्नो कामसंगै पारिवारिक जीवनसंग पनि सन्तुष्ट छन् । रेष्टुरेन्टमा कामको अनुभव भएका कारण उनले लजिस्टिक विभाग रोजे ।
पहिले गरेको काम र अहिलेको काममा केही समानता भएका कारण पनि आफूलाई सहज भएको उनी बताउँछन् । विजय भन्छन् , ” यो उमेर त मोज गर्ने समय हो । काम तीस वर्ष पछि गरौंला भनेर बस्दै नबसौं । काम गर्नासाथ सफल भइने होइन । अनुभवहरुले सफलता सम्म पुर्याउने हो । आफ्नो योजना बनाऔं, अनुभव बटुलौ । अष्ट्रेलियन आर्मीमा, प्रहरीमा पनि अहिले प्रसस्त अवसरहरु छन् ‘। – हिमालयन कंगारु बाट साभार
Previous Article कतार विश्वकपमा सुराक्षाका लागि नेपाली सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने यति धेरै तलब जान चाहनेले सम्पर्क गर्नुहोस्
Next Article ६५ तोलाका सुनमान्छे भन्छन्, बिजय शाहीलाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ कार्बाही हुन्छ ! (भिडियो हेर्नुहोला)